विश्वमै स्वादिष्ट परिकार बनाउने ५९ वर्षे चर्चित सेफको कोरोनाले ज्यान लियो - Nepal Insider
विश्वमै स्वादिष्ट परिकार बनाउने ५९ वर्षे चर्चित सेफको कोरोनाले ज्यान लियो
March 27, 2020 2414
काठमाडौं, विश्वकै चर्चित सेफ फ्लोयड कार्डोजको अमेरिकाको न्युजर्सीमा बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको छ। सिएनएनका अनुसार कार्डोजमा केही दिनअघि कोरोना पोजेटीभ देखिएको थियो। उनले टप सेफ मास्टर्स उपाधि जितेका थिए। ‘सेफ फ्लोयड कार्डोजको निधन भएको खबर सुनाउनुपर्दा हामीलाई गहिरो दुःख लागेको छ,’ कार्डोज कार्यरत हंगर इन्क हस्पिटालिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ। कार्डोज त्यहाँ कलिनरी निर्देशक थिए। मार्च १८ का दिन कार्डोजमा कोरोना पोजेटीभ देखिएको थियो ।
त्यसपछि उनलाई न्युजर्सीकै माउन्टेनसाइट मेडिकल सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो। सन् २०१७ मा सिबीएससँगको अन्तर्वार्तामा कार्डोजले आफू कसरी सेफ भएँ भन्ने कुरा बताएका थिए। ‘म वास्तवमा बायोकेमिस्ट हुुन चाहन्थेँ, तर, जब मैले आर्थर हेलीको होटल पढेँ, त्यसपछि मेरो लक्ष्य बदलियो। त्यो किताबमा ज्यादै फन थियो। म खानेकुरा बनाउने कलामा सुरुदेखि नै चाख लिन्थेँ। त्यसपछि मैले पकाउन सुरु गरेँ, जुन मेरा लागि मज्जाको अनुभव थियो,’ उनले भनेका थिए। भारतको मुम्बईमा हुर्किएका कार्डोज स्वीट्जरल्यान्डको लेस रोचेस कुलिनरी स्कुलमा अध्ययन सिध्याएर अमेरिका छिरेका थिए।
उनी तबला नामक भारतीय रेस्टुरेन्टमा एक्जुकेटीभ सेफ थिए, जुन उनले सन् १९९८ मा डेनी मेयरसँग मिलेर खोलेका थिए । त्यसपछि उनले न्युयोर्क सिटीमा पाओ वाल्ला र त्यसपछि बम्बई ब्रेड बार खोलेका थिए । उनको भारतको मुम्बईमा पनि रेस्टुरेन्ट रहेका थिए।
Prevधनुषामा कार्यरत नर्सकाे पीडा : आफै असुरक्षित भएर कसरी जनताकाे सेवा गराै सरकार !
Nextसुदूरपश्चिममा अनौठो हल्ला : घरको मूल दैलोमा खन्दा कोइला भेटिने, टीका लाए कोरोना भाईरस नलाग्ने
यसकारण,४५ वर्षीया आफ्नी आमाका लागि दुलहा खोज्दै गौरव !
सहयोग लिएर चिनियाँ विमान नेपाल आउँदै
हेमालाई न्याए दिन पुर्व डिएसपीनै पुगे कोठामा, दिए ला’ठि प्र”हार गर्ने प्रहरीलाई चेतावनी (भिडियो)
यो वर्षको होलीमा पर्दैछ ४९९ वर्षपछिको ठूलो शुभसंयोग !
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (42689)
काेराेनाका कारण पहिलाे पटक एक नेपालीकाे ज्यान गयाे (38909)
Coronavirus लाई सामान्य नठानौँ : १०२ बर्ष अगाडी १० करोड मानिसको मृत्युको तथ्य र दृष्य [भिडियोसहित] (16866)
यस्ता ब्यक्तिलाई मात्रै लाग्दछ कोरोना भाइरस ! जानी राखौं (14357)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (14334)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (13386)
रविले डाक्टर रुनालाई सोधे के नेपालमा कोʼरोना नआʼएकै होकी सरकारले सुचना लुʼकायो ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (12090)
लकडाउनमा दूध किन्न निस्केका युवाको प्रहरीको लाठीचार्जबाट मृत्यु, परिवारमा रुवाबासि (11387)
नेपालमा त कोरोना भाइरस आएकै छैन भन्नेहरूले एक चोटी अवश्य पढी सचेतनाका लागी सक्दो सेयर गर्नुहोला ! (10498)
नेपालमा कोरोना संक्रमितकहरुको संख्या धमाधम बढ्न थाल्यो (10216)
दुःख खेप्दै सीमामा अलपत्र नेपाली, भन्छन् ‘चार दिनसम्म न राम्रो खानापानी छ नत बसाइ
दुई देशको सरकारबीच सहमति गरेर स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई
कोरोना भाइरसबारे राउटेको बुझाइ : जङ्गलका राजालाई शहरको महामारीले छुँदैन !
कोरोना रोकथामका लागी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई दियो १२ करोड
© Copyright 2016–2020 Nepal Insider. All rights reserved.